Ciidamada PSF ee Puntland oo soo bandhi gay xubno ka tirsan Al-shabaab oo ay howl gal ku soo qabteen.[Video]
February 14, 2021 - Written by Editor
Boosaaso:-Ciidamada PSF ee Puntland ayaa howl gal ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan Buuraha Calamadow waxaa ay ku soo qabteen xubno ka tisran ururka Al-shabaab.
Ciidanka PSF ayaa howlgaladan ka sameeyey degaanada Maraje,Booj iyo Dhagax-dhaabur ee Buuraha Cal Madow.
Ciidanka Ammaanka Dowladda Puntland ee PSF ayaa waxaa ay saxaafadda u soo bandhi geen rag ay ku so qabteen howlgal ay ka sameeyeeen Buuraleyda gobolka Bari kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay maleegayeen in ay Qaxaxyo geliyaan inta u dhexeysa Bali Khadar iyo Gal-gala si ay ugu bartilmaamaystaan ciidamada amaanka ee Puntland ee Saldhigyada ku leh Buuraha Calmadow.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Ciidamada PSF iyo PMPF Puntland ay si wada jir ah hawlgal uga fuliyey degaanada Muguc iyo Ceel Onkod, wadada isku xirta Sugure, Balikhadar iyo Galgala ee Buuraha Cal Madow.
Saraakiisha Ciidamada difaaca Puntland waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan gulufkooda ka dhanka ah kooxaha nabad-diidka ah si Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ba ay u noqdaan nabad iyo waddan ka caaggan falalka argagixisanimo.